Ehe, Iyo yakaderera odha huwandu hweanoraswa masks kazhinji 5000 zvidimbu.
Ndinogona kutenga sampuli dzekuisa maodha?
Hongu, ndapota inzwa wakasununguka kutibata nesu.
Sei uchisarudza VTECH?
Tine mabhenefiti mashanu makuru:
1) Nyanzvi KN95 inoraswa kumeso inogadzira Mask.
2) Mitengo inonzwisisika, ipa zvidzikiso nehuwandu hwekuraira.
3) Inogona kugadzirwa nezvinodiwa zvako.
4) Hunhu waranti uye Yakakwana mushure mekutengesa sevhisi.
5) Mitsetse yekugadzira inoshanda uye yakagadzikana kugadzirwa kwehuwandu.